Wararka ugu dambeeyey caalamka & warqabadka SBC International – SBC
Wararka ugu dambeeyey caalamka & warqabadka SBC International
Wararka caalamka waxaa ka mid ah Col. Qadaafi oo isku day dil ka badbaadey, Obama oo sheegay in uu xabsiga Guantinimo alabaabada u laabayo xili ay soo baxeen warar sir ah & warar kale oo fara badan.
Dab qabsaday guri ku yaala magaalada Bekin oo ay dad ku dhinteen.
Uguyaraan 17 qof aya ku dhimatay 24 kalana wey ku dhaawacmeen dab ka qabsaday saakay dhismo afar dabaq ah oo ku yaala magaalada Bekin ee dalka Shiinaha sida ay sheegeen warbaahinada dalkaas.
Baaritaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in dabku uu sababay kadib markii niman alxmistayaal ah ee aanan sharciyeysneyn ay daaqado ku sameynayeen meel u dhow dhismaha.
Duqa magaalada Bekin iyo Mas’uuliyiin kale ayaa dalbaday in baaritaan dheeri ah la sameeyo oo lagu ogaanayo sababta keentay khasaaraha intaasi la eg ee ka dhashay dabka.
Xilli sii horeysay dab qabsaday meel dhismo ah ayaa waxa aku dhintay dad badan qaar kalana wey ku dhaawacmeen iyadoo xilligaasna dowladdu ay ka digtay in ay soo laabtaan falalkaas oo kale oo imika u muuqda in ay mar kale dib u dheceen.
Qadafi oo isku day dil ka badbaaday.
Ciidamada gaashaan buurto Nato ayaa duqeeyay guri ku yaala gudaha Bubul Cazizi ee uu degenyahay hoggaamiyaha Liibiya Col Mucammar Aladafi oo uu ku qaabili jiray Mas’uuliyiinta, ilamarkaana uu ku aban jiray kulamada Waziirada iyo kuwa kale.
Afhayeenka dhanka warbaahinta u qaabilsan Qadifana waxa ay sheegtay in duqeyntu ay aheyd mid la doonayay in lagu dilo Qadafi.
Ciidamada ammaanka ee Liibya ayaa sheegay in 3-4 gantaal ay ku qarxen dhimaha xalay xilli dambe.
Wararka ka imaanaya magaalada Tripoli ayaa sheegay in duqeyntan ay aheyd tii ugu awoodda badneyd ee laga maqlo magaaladaas tan iyo xilliga uu bilowday dagaalka lagula jiro Qadafi.
45 qof oo 15 kamid ahi ay xaalad qatar ah kujiraan ayaa ku waxyeeloobay qaraxa, taageerayaasha qadafi ayaana soo dhoobtay dhismaha kadib duqeynta, laamaha gargaarkana waxey la tacaalayaan dadka dhibaatada soo gaartay oo la heegay in qaarkood la weysanyahay.
Tv-ga Qaranka ee Liibiya, Chanelka Aljamahiriya iyo kan kale ee Ashababiya ayaa mudo 30 saac ah hawada ka maqnaa kadib marka uu dhacay qaraxa, taasoo loo fasirtay in ay moodayeen in duqeyntu uu ku waxyeeloobay Qadafi.
Dhanka kale mid kamid ah dadka deegaanka magaalada Misratah ayaa u sheegay wakaladda wararka ee Reuters in ciidamada Qadafi ay duqeeyen magaaladaas iyo kuwa kale oo dreis la ah ayna ku dhinteen 6 qof oo rayid ah.
Dacwad oogaha guud ee Masar oo amray in Mubarak lagu daweeyo Cusbital ciidan.
Dacwad oogaha guud ee Masar Mustashar C/majiid Maxmuud ayaa shalay amar ku bixiyay in Madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Xusni Mubarak laga bedelo cubitalka uu kujiray islamarkaana loo bedelo mid kamid ah cusbitaalada Ciidanka.
Afhayeen u hadlay makmadda guud ee Masar ayaa sheegay in dacwad oogaha guud uu qoraal ka helay dhaqtarka Mubarak daweynayay oo sheegay in xaaladiisu ay wanaagan tahay ayna macquul tahay in cusbitla kale loo bedelo.
Labada wiil ee uu dhalaya Mubarak Jamaal iyo Calaa iyo waliba qaar kale oo katiranaa xukuumaddii Mubarakayaa dalbaday in laga bedelo xabsiga ay kujiraan kadib markii la xiray inta ay socoto baarityaankooda.
Dacwad oogaha guud ee Masar ayaa soo cusbooneysiiyay xariga Mubarak ee 15-ka maalin ah wuxuuna tilmaamay in la xirayo marka ay soo wanaagsanaato xaaladiia caafimaad.
Dhanka kale magaalada Darca ee dalka Siria ayaa dad ku dhintay qaar kalana ku dhawacmay kadib markii saakay ay magaladaasi galeen ciidamada Military-ga ee xukuumadda oo ay markii dambe isku dheceen dibad baxa yaal careysan.
Maxaabiis tira badan oo ka baxsaday xabsi ku yaala Magalada Qandahar.
magaalada Qandahar ee koonfurta dalka Afghanistan waxaa xabsi ka faktay maxaabiis kabadan 470 qof sida uu sheegay afhayeen u hadlay xabsiga Qulam Dastaqir oo u waramayay wakaaladda wararka ee AFP.
Maxaabiista ayaa lasheegay in ay mareen xiliga ay baxsanayeen god ka qodnaa banaanka xabsiga ee soo gaarayay ilaa gudaha maxaabiista baxsatay ayaana la sheegay in ay u badanyihiin ururka Dhaliban ee dagaalka kala soo horjeda xukuumadda Afghanistan.
Afhayeen u hadlay coodanka xabsiga Qandahar ee ay ka baxsadeen maxaabiista aya sheegay in ay soo qabteen qar kamid ah dambiilayaasha baxsaday.
Afhayeen u hadlay ururka dhalinbana waxa uu tilmaamay in ku dhawaad 5 bil ay qodayeen godkaas si ay ugu soo baxsadaan dadka iyaga ka tirsan ee u xirnaa xukuumadda Afghanistan.
Dagaalo ka dhacay koonfurta Sudan oo ay ku dhinteen dad aad u tira badan.
Dagaalo ka dhacay labadii maalin ee lasoo dhaafay gobolka Junquli oo 25 KM koonfur ka xigta magaalada Malakaal ee koonfurta Sudan ayaa la sheegay in ay ku dhinteen in kabadan 100 qof tira kabadana ay ku dhaawacmeen kadib dagaal dhex maray ciidamada dhaqdhaqaaqa xoreynta Sudan SPLM iyo kuwa kasoo horjeeda oo ila reer koonfureed ah balse ka biya diidsan qaabka ay ku socoto siyaasadda Koonfurta.
Mas’uul u hadlay xukuumadda Sudan ayaa sheegay in 57 ka tirsan ciidamada fallaagada ay dagaalka ku dileen qaar klana ay ka dhaawaceen, mid kamid ah shaqaalaha WFP oo ka howlgalayay magaalada Junquli ayaa la sheegayaa in shalay la dilay iyadoo aanan la ogeyn cida dishay.
Q.M-na waxa ay sheegtay in sanadkan gudihiis ay 800 oo qof ay ku dhinteen koonfurta Sudan taasoo ay ku sheegtay in ay tahay arrin laga xumaado.
Dhanka kale Xukuumadda Koonfurta Sudan ayaa tilmaantay in ay xireen laba hoggaamiye oo madax u ahaa maleeshiyaadka dagaalada kala soo horjeeda.
Xukuumadda Koonfurta Sudan ayaa ku eedeysay dowladda Al-bashiir in ay hubeeyaan mucaaradka iyagoo diidan in ay degto koonfurta kadib markii ay go’aansadeen in ay ka go’aan sudan inteeda kale.
Bisha July ee sanadkan ayaana lagu wadaa in koonfurta sudan ay si toos ah u noqoto dowlad kamadax banaan sudan inteeda kale.
Rabshadihii ka dhacay Nigeria Doorashada kadib oo ay dad badan ku dhinteen.
Hey’ad u dooda xuquuda aadanaha ee ka dhisan dalka Nigeria ayaa sheegtay in inkabadan 500 oo qof ay ku dhinteen rabshadihii ka dilaacay dalkaas kadib doorashaddii madaxtinimada ee uu ku guulestay Goodluck Jonthan 16-kii bihan April.
Bayaan ay soo saartay hey’adda ayay ku sheegtay in dadka dhintay badankood ay kasoo jeedaan goblka Kaduna ee ay u badanyihiin Muslimiinta isla markaana laga yabo in ay sii korodho dhimahada maadaama aysan weli si toos u istaagin rabshadaha kajira dalkaas.
Shiihu Sani oo ah madaxa Hey’adda u dooda xuquuqul insaanka oo fadhigeedu yahay gobolka Kaduna ayaa sheegay in tirakoobkii ugu dambeeyay ee la sameeyay ay gaartay dhimashada 516 qof, tobnaan kunna ay ka carareen guryahooda.
Waxaana jira warar sheegaya in rabshado kale oo ka xoogan kuwa imika dhacay la filayo in ay dhacaan maalinta berrito ah oo lagu wado in ay bilaabato codeynta PC-yada ama guddoomiyayasha gobolada.
waxaana jirta cabsi ku aadan in uu dhaco dagaal diimeed kadib markii qaar kamid ah muslimiinta dalkas ay gubeen dhowr kaniisad , Masixiyiinta oo taasi ka jawaabayana ay fooda is dareen muslimiinta ,halka labada dhinacba ay soo gaareen khasaarooyin kla duwan.
Rabhadaha ayaa bilowday kadib markii Goodluck Jontaahan oo kasoo jeeda Koonfurta miana ah Masixii uu ka guuleestay Maxamadu Buhari oo ah muslin kasoo jeeda waqooyiga.
Buhari ayaa ika fogeeyay in uu ka dambeeyo waxa uu ugu yeeray murugo aanan laga aamuso karin, oo aanan laheyn marmarsiiyo lagu sii wado.
Nin isku dayay afduub diyaarad laga leeyahay Talyaniga oo gacanta lagu dhigay.
Waxaa lagu guul dareystay in la afduubto diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Talyaaniga Al-italia oo u safreysay inta u dhexsay Xarunta dalka Fransiiska ee Paris iyo magaalada Roma ee Talyaaniga, afduubaha ayaana isku dayay in uu diyaaradda u leexiyo dhanka Liibiya.
4 qof oo isugu jiray shaqaalaha iyo Polit-yada diyaaradda oo ay wehliyaan qaar kamid ah dadka musafiriinta ahaa ayaa usuura gashay in ay si awood ah ku qabqabtaan ninka iskudayaya afduubka oo sitay midi ama toorey, dhaqtar kamid ahaa dadkii saarnaa diyaaradda ayaana siiyay ninka kaniini dejiya isagoo ka muuqatay Caro iyo maskaxdiisa oo aheyd mid kacsan.
Diyaaradda oo ay saarnaayeen 131 qof ayaa si nabad ah ku degetay garoonka diyaaradaha ee Fiomicimo ee magaalada Roma, ninka iku dayay afduubka oo kasoo jeeda dalka kazakhistan ayaana gacanta loo geliyay Police-ka Roma.
Police-ka ayaa sheegay ninka oo lagu magacaabo Falery Toladshif oo 48 sano jir ah in uu kamid ahaa koox u dhalatay Kaazakhistan oo hey’adda waxbarashada ee Q.M Unesco ugu shaqeeya magaalada Paris ee dalka Franiiska.
Ciidamada ammaanka Talyaaniga ayaa sheegay in ay sameynayaan baaritaano dheeri ah oo ku aadan sababta ku asabtay ninkan in uu ku kaco falkaas.
Wikileaks oo kashifay in dadka ku xiran Guantanamo ay badankood yihiin dad aanan laheyn wax dambi ah.
Decomtiyo sir ah oo laga helay Mareykanka oo lagu soo bandhigay barta internetka ee Wikileaks ayaa lagu sheegay in Mareykanku uu aaminsanyahay dadka ku xiran Guantanamo in ay u badan yihiin dad aanan dambi laheyn iyo kuwa aanan qatar ku aheyn siyaasadda mareykanka, balse ay doonayaan in ay isaga xirnaadaan xabigaas.
Dadka ku xiran Guantanamo ayaa lagu sheegay in ay yihiin 780 qof 220 kamid ah oo kaliya ay yihiin argagixiso, dadka xirana ay kamidyihiin 150 kamid ah beeraley iyo darawalo u dhashay dalalka Pakistan iyo Afghanistan, xilliga lasoo xirayayna dad lagu qalday amaba ay ku sugnaayeen goob aanan wanaagsaneyn.
Wasaaradda gaashaan dhigga mareykanka ayaa ku sheegtay Sirta uu faafiyay Wikileaks in ay tahay wax laga xumaado sirahaasna ay yihiin kuwa xilli hore ahaa.
Sirtan Mareykanka ku saabsan ayaa la sheegay in ay helen nuqul kamid ah wargeysyada ugu waaweyn Yurub iyo Mareykanka
Obama ayaa sheegay sanadii 2009-ga in gebi ahaan alababda loolabayo xasbiga Guantaanmo taasoo aan suura gelin ila iyo imika
Siraha kale ee lasoo bandhigay ayaa waxaa kamid ahaa in ururka Alqacida ay qorshenayaan in ay Bomb Nuclier-ah ku aasaan dalal kamid ah qaaradda Yurub iyagoo qarxinaya haddii ay dhacdo in gacanta lagu soo dhigo hoggamiyaha Alqacida Usama Bin laden, in ay ay sumeynayan Mukeyfyada ku xiran goobaha guud ee dalka Mareykanka si ay ugu la’daan dad aad u tira badan iyo waliba in ay shaqaalo ku yeelanayaan garoonka ugu weyn London ee Heathrow Airport si ay ugu fududaato howl gallo ay ka fuliyaan gudaha London.
Mohamed Hajji Hassan